UPhilip Morris Archives - I-US Ilungelo Lokwazi
Ikusasa Lezidingo Zokudla Ukucaca Nobuqotho
Posted on July 24, 2018 by USusan Lang
Lo mbhalo ushicilelwe ekuqaleni ku Ibhizinisi Labatshalizimali Nsuku Zonke.
NguStacy Malkan noCarey Gillam
"Izinkampani zokudla azikwazi ukuthola ukuthi yini abantu baseMelika abafuna ukuyidla," ngokusho kukaJuni Indatshana yeWall Street Journal.
Abaphathi bemboni yezokudla “bashesha ukuphuma,” Kubike iWSJ ngo-Okthoba, nendawo yokwamukela izivakashi yokudla “iyaqhekeka,” Kuchaza uPolitico, njengoba izinkampani zokudla zingavumelani ngokuthi zingaphendula kanjani ekushintsheni kokuthandwa ngabathengi.
Kepha akuyona imfihlakalo abantu baseMelika abafuna ukuyidla - noma kungani imboni yokudla inzima.
Abathengi bafuna ukudla okungenayo imibala yokufakelwa, ukunambitheka okungamanga, izibulala-zinambuzane, izivimbelo, ama-hormone okukhula, ama-antibiotic nama-GMO, njengoba fortune lo magazini wabika ngo-2015 - lezi zitayela eholwa izinkulungwane zeminyaka baqhuba “inguquko eyizigidi eziyizinkulungwane ezingama- $ 18 yokudla.”
Kepha kunokuba banikeze okufunwa ngamakhasimende, abanye abadlali bemboni yokudla balwela ukudida kunokuhambisana nezimfuno zemakethe.
Phakathi kwamaqhinga asebhokisini lamathuluzi, basebenzisa amaqembu angaphambili nezifundiswa ezinobungane ukusunduza inkulumo-ze yokuqhakambisa imikhiqizo yabo, nokujivaza labo abamele imininingwane ethembekile.
Isibonelo esisodwa sakamuva nesicacile sivele lapha kwiBusiness Daily yabatshalizimali, ezihlokweni ezimbili zemibono ezibhalwe nguHenry I. Miller, ozakwabo waseHoover Institution. Ukuqala kabusha kukaMiller kumenza abonakale enegunya futhi ehlaba umxhwele - othile abathengi abangamethemba.
Kepha ekusebenziseni isithangami se-IBD ukujikijela iqembu elincane elingenzi nzuzo esilisebenzelayo, i-US Right to Know, uveze ukwethembeka kwakhe kwizintshisekelo ezithile zemboni ezifuna ukugcina abathengi besebumnyameni.
Inhlangano yethu ikhuthaza iqiniso nokusobala ohlelweni lokudla. Sichitha isikhathi sethu esiningi sifaka izicelo zemininingwane nemibhalo evela ezinhlanganweni zombuso nezikahulumeni kanye nezikhungo ukuze sabelane nabathengi ngezindaba zenqubomgomo yokudla.
UMiller uye waziwa kahle ngokubeka isayensi nempilo yomphakathi endaweni yesibili kwezintshisekelo zebhizinisi. Wayebhalwe ohlwini lwe- Imemo ka-1994 “njengomsekeli obalulekile” womkhankaso kaPhilip Morris wokulwa nemithetho kagwayi.
Wabizwa futhi ku-an idokhumenti yangaphakathi yeNkampani yeMonsanto njengomthombo ongasiza ekuhlambalazeni iphaneli yocwaningo lomdlavuza le-World Health Organisation ngemuva kokuthi imemezele ukuthi i-herbicide eyisihluthulelo yeMonsanto iyi-carcinogen yabantu “okungenzeka”. Lowo mbulali wokhula, i-glyphosate, usetshenziswa kabanzi emhlabeni jikelele ekukhiqizweni kokudla kwezolimo.
Uhlelo lweMonsanto lokuvikela umbulali walo wokhula bekungeke lucace bha: "Zibandakanya noHenry Miller" kusho. Imibhalo ibikwe I-New York Times uveze ukuthi udaba oluthunyelwe nguMiller eForbes egxeka iphaneli lomdlavuza "ngokuyinhloko lufanekisela" uhlaka olunikezwe yisikhulu seMonsanto. IForbes yabunqamula ubudlelwano bayo noMiller ngenxa yalokho futhi ususe zonke izindatshana zakhe kusuka kusayithi.
Isinyathelo sikaMiller manje sokuhlazisa i-US Right to Know sibonakala siqhutshwa yizimboni ezifanayo ezamholela ekutheni azame ukudicilela phansi iqembu lesayensi yomdlavuza lomhlaba jikelele. Enganikezi bufakazi, wathi i-US Right to Know ngandlela thile ihlangana nohulumeni waseRussia.
Iziphambeko zokunyundela ziyindida, kubhekwa ukuthi inkampani yezobudlelwano bomphakathi iqinile kuqashiwe ngemboni yezolimo ukusindisa isithunzi semikhiqizo yabo ese-GMO nemikhiqizo yokubulala izinambuzane kwakunguKetchum - inkampani kwaphoqa izintshisekelo zaseRussia eMelika iminyaka eyishumi kuze kube yi-2015.
Ngakho-ke kungani izintshisekelo ezithile zomkhakha wokudla ezihlanganayo zingafuna noma zidinge indoda yangaphambili ukuze ihlasele inzuzo yethu encane? Impendulo ilula: Uphenyo yi-US Right to Know ithole imibhalo efihliwe - iningi layo selithunyelwe ku- Ingobo yomlando Yemibhalo Yezimboni ze-UCSF - lokho sekuqubule uphenyo oluningi lwabezindaba emisebenzini yokunxenxa nokusabalalisa inkulumo yezimboni zokudla nezolimo.
Kudicilelwe izindatshana mayelana namasu embonini yokudla eyimfihlo yokudukisa abathengi, abenzi bomthetho kanye nabatshalizimali New York Times, BMJ, i-Guardian, Okwezwe, Bloomberg, Boston Globe, CBC, omagazini bezempilo yomphakathi nezinye izindawo eziningi.
Kanye noMiller, uMonsanto wathinta ezinye eziningi "Abalingani bemboni" ukuzama ukudicilela phansi ososayensi abebexwayisa ngemithi yokubulala ukhula kaMonsanto, kufaka phakathi i-Genetic Literacy Project, Grocery Manufacturers Association namanye amaqembu akhokhelwa izimboni zokudla.
Lezi yizinhlobo zobudlelwano bomphakathi ama-shenanigans okufanele imikhiqizo yokudla ikugweme uma benethemba lokuzuza abathengi.
Kwirekhodi, asinabo ubudlelwano nakancane neRussia. Siyiqembu elibheka imboni yezokudla. Sihlola ukuthi izimboni zokudla nezamakhemikhali ezolimo zisebenza kanjani ekusithekeni ukuthonya abenzi bomthetho, abalawuli, izifundiswa nabanye. Futhi sabelana ngalolo lwazi nomphakathi.
Iqiniso nokubekwa obala kuyimibono esabekayo yezinhloso ezithile zebhizinisi, ukuze uqiniseke. Kepha laba badlali bezinkampani kanye nabatshalizimali babo bangaba ukuhlakanipha ukulalela, futhi babonge, amakhasimende afuna izimemezelo zokukhangisa ezithembekile nolwazi oluvulekile mayelana nobungozi kanye nemivuzo eza nohlelo lokudla kwanamuhla.
Imibhalo kaDkt.Henry I. Miller okukhulunywe ngayo lapha ingatholakala ku:
I-Russia Yimbi Kakhulu Kunokungenela Okhethweni Lwethu - Iphazamisa Esayensi Yethu, Ingxenye I
I-Russia Yimbi Kakhulu Kunokungenela Okhethweni Lwethu - Iphazamisa Esayensi Yethu: Ingxenye II
Le ndaba ekuqaleni yabonakala Ibhizinisi Labatshalizimali Nsuku Zonke.
Ukudla Okucatshangwayo Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, glyphosate, I-GMA, Inhlangano Yabenzi Begilosa, UHenry I. Miller, Isikhungo seHoover, UKetchum, Monsanto, UFiliphu Morris